सरोगेसीबाट बुबा बन्दैछन् सलमान खान ? भन्छन्, ‘बच्चा चाहन्छु’ « News24 : Premium News Channel
काठमाडौं/एजेन्सी । बलिउड अभिनेता सलमान खानको नाम सुन्ने बित्तिकै सबै फ्याहरुलको मनमा एउटा प्रश्न तेर्सिन्छ, त्यो हो– सलमानले कहिले बिहे गर्छन् ? यो प्रश्न सँधै चर्चामा रहन्छ । केही दिन पहिले उनी सरोगेसीबाट बुबा बन्दै छन् भन्ने समाचार बाहिरिएको थियो । अहिले आएर अभिनेता खानले पनि एक अन्तरवार्ताको दौरानमा आफूले एउटा बच्चा चाहेको कुरा बताएका छन् ।
वर्क फ्रन्टको कुरा गर्नुपर्दा सलमान खानको फिल्म ‘भारत’ ५ जुनबाट ईदको अवसरमा दर्शकमाझ रिलिजमा आउँदैछ । यो फिल्मलाई अली अब्बास जफरले निर्देशन गरेका हुन् । अभनेत्री क्याट्रिना कैफले उनको लभ इन्ट्रेष्टको भूमिका निभाउँदै छन् ।
गायिका टीका पुनको राष्ट्रिय ‘गीत सबै भन्दा प्यारो लाग्छ’ बजारमा (भिडियो)
गजल : डेटिङ सेटिङ गर्ने कुरा…
सुशान्तको निधनपछि तनावमा परेका करणले ट्विटरबाट गरे सयौं चलचित्रकर्मीलाई अनफलो
पल, बले र सुधिरसँग रियाशाको रोमान्स (भिडियो)
क्वारेन्टाइनबाट घर फर्किएका एक युवकको मृत्यु
access_time 5:20 pm
access_time 5:12 pm
मनिराज पाण्डे कालिकोट, ७ सुर्खेत । सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनबाट घर फर्किएका एक जना युवकको
बेइजिङ, ७ असार । चीनको राजधानी बेइजिङमा करिब २० लाख जनामा गरिएको परीक्षणमा थप २२
काठमाडौं, ०६ असार । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा